Rakotomanana Honoré : “Tsy entinentim-poana ny samboady” | NewsMada
Rakotomanana Honoré : “Tsy entinentim-poana ny samboady”
“Misy ny fomba sy fanao parlemantera, fa tsy entinentim-poana iny samboady iny. Manome toky ho an’ny vahoaka malagasy isika: mba tena hoe Antenimierandoholona fitaratra ity Antenimierandoholona ity amin’izao Repoblika IV izao.”
Io ny nambaran’ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotomanana Honoré, tamin’ny lanonana fametrahana samboady ho an’ireo loholona miisa 16, faritany Antananarivo, teny amin’ny lapan’Anosikely, afakomaly.
“Tsy entinentim-poana akory izao samboady izao, fa misy hasiny, misy lanjany, misy dikany”, hoy izy. Ny endrika ivelany: manaporofo ny maha mpitondra fanjakana, loholona mpanao lalàna, amin’ny alalan’ny fisalorana samboady.
Tsy endrika ivelany fotsiny izany, fa tena atao ao anaty fo, atao ao anaty saina, ka iainana tontolo andro, nofisina mandrak’alina, enti-matory raha ilaina, mba hanasoavana an’i Madagasikara.
Nisy ny filohan’andrimpanjakana tonga nanome voninahitra ny lanonana. Teo koa ny minisi-panjakana, mpanolotsaina ny filohan’ny Repoblika…